टीप्पणी : ‘यसकारण असफल भयाे अाेली सरकार’-Nagarikaawaj.com
टीप्पणी : ‘यसकारण असफल भयाे अाेली सरकार’
'जम्बो क्याबिनेट' ले उनलाइ कहिलेसम्म सरकारमा टिकाइराख्ने हाे
कपिल ज्ञवाली / बुटवल,पुस ११ ।
सरकारबाट अाम नागरिकले याे अबस्थामा के पाएका छन् ? अाधारभूत सेवा सुबिधा वा अन्य केहि पाएका छन् ? सर्बत्र यहि प्रश्न तेर्सिएकाे छ । तर जवाफ दिनेहरु जनताकाे माझमा छैनन् छन् त सत्ताकाे रसस्वादनमा मात्र केन्द्रित।
अन्यन्तै कठिन परिस्थितीका बिचमा पनि अाम नागरिकहरुले दैनिक जसाेतसाे चलाएकै छन् । हातमुख जाेडेकै छन् ।तर सरकारले अाम नागरिकका लागि सिन्काे सम्म पनि भाँचेकाे छैन । अघिपछिकाे सरकार र याे सरकारबाट नागरिकहरुले एउटै कुरा खाेजेका थिएनन् केहि फरकपन खाेजेका थिए । सरकारले काम गर्न चाहेकाे भए सक्थ्याे र काम गर्नै सकेन याे अबधिमा पनि । सरकारकाे सर्बत्र अालाेचना भैरहेकाे छ ।
सरकारले गहन जिम्मेबारीहरु याे बेला निभाउनुपर्ने थियाे । बिना तयारी प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष समेत रहेका बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा अाेली बाेलेर मात्र केहि हुनेरहेनछ भन्ने कुरामा पुगेका छन् ।
ओलीको कार्यशैलीबाट विपक्षी मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासमेत अाजिद भएका छन् । उनीहरुका असन्तुष्टीहरु क्रमश बाहिर अाएका छन् ।
गत बैसाखका २ भूकम्प र त्यसपछि नाकाबन्दीको स्थितिलाई सरकारले भुलेकाे छ । नागरिकलाइ फुस्राे राष्ट्रियताकाे नारा बाेकाएर सरकार चुप लाग्दा नागरिकहरु पीडा माथि पीडा सहन बाध्य बनेका छन् ।
याे सरकारकाे बिराेधमा शडकमा उत्रिन धेरै समय नलाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ओलीले चौथोपटक गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर अाफू असंवेदनशील प्रधानमन्त्रीका रुपमा परिचित बने । राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनलेका लागि अनाबश्यक रुपमा मन्त्रालय फुटाउने र बिनाबिभागका मन्त्री बनाउनु ठिक हाेइन।
नाकाबन्दीका कारण मानवीय संकटको अवस्था र अाम नागरिकहरु दैनिक उपभाेग्य बस्तुकाे हाहाकारमा परेका बेला सरकारले भने जनतामाथि चिसो पानी खन्याएकाे छ।
सरकारले ६-६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएकाे छ । एक वर्षभित्र मुलुकबाट लोडसेडिङ समाप्त पार्ने आश्वासन दिदै दैनिक १० घण्टा लाेडसेडिङ् बनाएकाे छ ।सर्वसाधारणलाई एक सिलिन्डर ग्यास नपाएर बिकल्प खाेजिरहेका छन् ।
सरकारले भुकम्पपिडीतलाई शीतमा सुताउनु, अाम नागरिकलाई भाेकमरीमा पुर्याउनु , संविधानले तोकेको २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रिमण्डल संख्या नबनाउने प्रावधान लत्याउनु , फुस्राे र बिकल्पबिनाकाे राष्ट्रियताकाे चर्काे नारा लगाउनु , अाधादर्जन उपप्रधान मन्त्रीहरु बनाउनु, अाफ्ना अासेपासेलाई सरकारी नियुक्ती दिनु , चिसाेले मृत्युभएका आठ जना भन्दा आफ्नो कुर्सीलाई बढि प्राथमिकता दिनु, अनाबश्यक मन्त्रालय फुटाएर नागरिकलाई गरिबीकाे भारी बोकाउनु , राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनमा सक्रिय रहनु , नाकाबन्दी लम्बाएर मानवीय संकट चर्काउनु , हावाबाट बिजुली निकाल्ने गफ दिनु, एक बर्षमा लाेडसेडिङग अन्त्य गर्ने कुरा गर्दै दैनिक , मधेश अान्दाेलनलाई ठिक ढंगले ब्यबस्थापन नगर्नु , अाफ्नै पार्टीभित्रपनि एउटा मात्रै गुट बाेकेर हिड्नु ,धैर्य र संयम हुँदै सरकारलाई साथ दिएका जनतामाथि चिसाे पानी खन्याइदिनु । प्रमुख काम यीनै हुन् सरकारका ।
जाडोका कारण अहिलेसम्म ८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अर्कोतिर, संविधानले तोकेको २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रिमण्डल संख्या नबनाउने उनैले लत्याएकाे सबैलाइ जानकारी नै छ । उनकाे राजिनामा खाेज्दै केहि सत्तासिनदलहरुले नै नेताहरुले भाषण दिइरहेका छन् । भने चुनावमा अाेलीलाइ भाेट हाल्ने दल नेकपा स‌ंयुक्तले भने यसअघि नै सरकारलाइ दिएकाे समर्थन फिर्ता लिइसकेकाे छ ।
असाेज २४ गते मुलुककाे ३८ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओलीले ३३८ मत ल्याएका थिए । संसदको तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी, चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहितका साना दलको समर्थनमा ओलीलाई छ । अब काम गर्न नसक्ने हाे भने कुर्चिमा बस्नुभन्दा मार्ग प्रशस्त गर्नुबेस हाेला की ।
‘जम्बो क्याबिनेट’ ले उनलाइ कहिलेसम्म सरकारमा टिकाइराख्ने हाे त्याे भने हेर्न बाँकी छ । [email protected]